Izindlu e- Echuca - I-Airbnb
Izindlu e- Echuca
I-Echuca House iyindawo eqashisayo yeholide efudumele nenethezekile e-Echuca eMfuleni iMurray, eVictoria.
amakamelo okulala amane amakhulu
amagumbi okugeza amabili
ikhishi elivulekile, izindawo zokudlela kanye negumbi lokuphumula.
Le ndlu inendawo yawo wonke umuntu.
Kodwa kukhona okwengeziwe:
Ivulandi elikhulu elingaphandle elingaphansi elinezimpumputhe zokuvikela elangeni, emvuleni nasemoyeni
indawo engemuva evikelekile
indawo enotshani yokudlala noma ukuhlala elangeni
inqwaba yokupaka ngaphandle komgwaqo ene-carport
PLUS neshede elikhulu lezikebhe noma ama-jetski.
50" i-smart TV egumbini lokuphumula
32" ama-smart TV kuwo wonke amagumbi okulala
Umbhoshongo wesipikha ukuze ulalele izingoma zakho
kanye nokufudumeza okufakwe emanzini ukuze ukhululeke.
Izihlalo Eziphakeme Ezimbili kanye
Ama-Porta Cots amabili ayatholakala
Khetha ukucushwa kwakho kokulala kusuka:
Igumbi lokulala 2 - Umbhede wenkosi (noma izingoma ezi-2 uma uthanda)
Bedroom 3 - 2 singles (noma King bed uma uthanda)
Ngelineni lekhwalithi, ama-doonas, nemicamelo ehlinzekwa kanye namathawula, omati bokugeza, amathawula ezandla namawasha obuso nezandla ezinhle ezenziwe ngazo zonke izinsipho zezivakashi zemvelo, akukho okumele ukwenze ngaphandle kokungena!
Uzonikezwa netiye, ikhofi, ubisi, amathebhu omshini wokuwasha izitsha, impushana yokuwasha, amafutha omnqumo kanye nethawula lephepha le-barbie, ukugoqa okujabulisayo, i-foil, izikhwama zikadoti, nosawoti kanye nopelepele.
I-Echuca House isendaweni emaphakathi futhi ibanga lokuhamba ngezinyawo ukuya ezitolo, ezindaweni zobumnandi, ezindaweni zokudlela kanye naseziteshini zamabhasi nezitimela.
Ngithemba ukukubona lapha maduze.
UPaul noDonna McManus
4.91 · 114 okushiwo abanye
I-Echuca House ingaphakathi kwendawo yokuhlala enhle ethule futhi ingamamitha angama-650 nje ukuya ezitolo ezinkulu, iposi, umgwaqo omkhulu futhi incane kakhulu ukuya esiteshini sesitimela nasezindaweni zobumnandi.
Sihlala futhi sisebenza eduze kakhulu futhi simane sishayelwa ucingo